Waa Kee Badalka Christian Eriksen Ee Kooxda Tottenham Hada Siiba Samaysay. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Tottenham ayaa u muuqata mid jilcinaysa bixitaanka Christian Eriksen kadib markii ay sameysay saxiixeedii labaad ee Janaayo.
Ku dhawaad ​​labo isbuuc ka dib markii ay amaah kula soo wareegeen Gedson Fernandes, kooxda ka ciyaarta Premier League ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran inay Steven Bergwijn kala soo wareegaan PSV.
Soo wareejinta soo socota ayaa xasillooni darro ka abuurtay Eindhoven, halkaas oo la sheegay in ay cadaawad ka jirto Spurs.
Kooxda Tottenham ayaa ku dhaw in ay hesho 30 milyan euro (£ 25.3m) si ay u hesho garabka reer Holland Bergwijn, sida laga soo xigtay The Guardian.
22-jirkan, ayaa sagaal jeer u saftay xulka heerka caalami, waxaana la sheegay inuu u safray London si uu u dhameystiro heshiiska.
Tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda PSV Ernest Faber ayaa cadeeyay in Bergwijn uu codsaday in laga tago ciyaartii barbaraha 1-1 ee Eredivisie ee ay la galeen Twente, isagoo u sheegay suxufiyiinta: “Waa dookhiisa. Waxaan ubaahanahay kaliya ciyaartoy boqolkiiba boqol diirada saareysa PSV.”
Laacibkii hore ee kooxda Ajax ayaa markii dambe caddeeyay nooca dhacdooyinkiisa ah isagoo fiidiyoow ah oo la geliyay bartiisa Instagram-ka, halkaas oo uu ku adkeystay inuusan ahayn “jiir” isla markaana uu Faber u duceeyay inuu u wareego.
Bergwijn waxaa lala xiriiriyay kooxda Bayern Munich sanadkii 2019
Waxay noqon kartaa Bergwijn, Eriksen oo ku bilaaban doona kulanka isbuucaan ee Spurs, Sky Sport Italia ayaa sheegeysa in ciyaaryahanka reer Denmark inuu qalinka ku duugi doono qandaraaskiisa Inter ka dib markii uu maray tijaabada caafimaadka isniinta.
Kooxda LaLiga ee Sevilla ayaa ka shaqeyneysa inay la soo saxiixato garabka Milan Suso heshiis 18 bilood oo amaah ah, CalcioMercato ayaa sidaa leh.
Xiddigii hore ee kooxaha Newcastle United iyo Paris Saint-Germain ee Hatem Ben Arfa ayaa ugu dambeyntii raadinaya guri cusub? 32 jirkan, oo ah wakiilka xorta ah tan iyo markii uu ka tagay kooxda Rennes, ayaa qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Real Valladolid, sida ay qortay Mundo Deportivo.
Crystal Palace ayaa diiday dalabka PSV ee ku aadan daafaca bidix ee lagu qiimeeyo 9 milyan ginni Patrick van Aanholt, sida ay qortay Daily Mail.
West Ham iyo Burnley ayaa isha ku haya xiddiga qadka dhexe ee kooxda Sampdoria Ronaldo Vieira, sida ay qortay Athletic.